Naadiga Clubhouse waxay daadisay Taageerayaashii oo soo bandhigay door cusub | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Naadiga Clubhouse waxay daadisay taageerayaashii oo soo bandhigay door cusub
Naadiga Clubhouse waxay daadisay taageerayaashii oo soo bandhigay door cusub
Clubhouse waxay dhowaan soo bandhigtay astaamo badan oo cusub waxayna sidoo kale ka dhigtay madal dadweyne. Waxay meesha ka saareen xeeladdii martiqaadka-kaliya oo waxay ka dhigeen goobta dadweynaha si qof kastaa ugu biiro oo u isticmaalo.
Cusbooneysii ugu dambeysay, Clubhouse waxay ku soo bandhigtay isbedelo badan oo waaweyn oo ku saabsan codkooda warbaahinta bulshada. Clubhouse waxay u beddeshay calaamadeeda sawirka Mound Stone Meezy (@MEGAMEEZY).
App-ka Clubhouse waxa kale oo uu soo bandhigay astaanta Ciyaaraha Olombikada ee profiles-ka Clubhouse. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto calanka dalkaaga Sharaxaada si aad u muujiso calaamada Ciyaaraha Olombikada ee gaarka ah.
💬 Backchannel-ka kaliya wuxuu ku dhuftay 100 milyan oo fariimo ah oo la diray, oo ka yimid 1.2M soo dire gaar ah
🚢 hadda oo waxyaabo waaweyn ay ka maqan yihiin, waxaan dib ugu soo laabanaynaa toddobaadle (ish) markab & siideyn
🏠 waxaan ku sameyneynaa xoogaa isbedelo qaab dhismeed ah naadiyada, faahfaahinta halkan: https://t.co/ESY811tBJj
- Clubhouse (@Clubhouse) Luulyo 25, 2021
Clubhouse ayaa bilaabay habka fariimaha degdega ah 24kii Luulyo oo wata magaca "Backchannel". Clubhouse Backchannel sidoo kale waxa uu ka gudbay calaamada 100ka milyan ee fariinta oo leh 1.2 milyan oo soo dire gaar ah.
Cusboonaysiintan, Clubhouse waxay daadisay raacayaasha oo hadda wixii ka dambeeya ma jiri doono wax caynkaas ah. Kooxda martida loo yahay/adminayaashu uma baahna inay u beddelaan kuwa raacsan xubnahooda, taageerayaashu si toos ah xubnaha ayaa loogu beddeli doonaa. Sida muuqata waxay badbaadin doontaa wakhtiga Admins
Haddii aad tahay maamulaha naadiga, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah in aad xubin ka noqoto "Furan" (macnaheedu waa qof kasta oo ku biiri kara) ama "Oggolaanshaha" (macnaheedu waa adiga shakhsi ahaan aad u oggolaatay dhammaan xubnaha).
Waxaan aaminsanahay in kuwa soo bandhiga bandhigyada dadweynaha ay rabi doonaan in xubinnimadooda naadi loo dhigo "Fur". Tani waxay ka dhigan tahay inaysan qasab ku ahayn inay u beddelaan raace kasta oo gacantooda xubin ka noqda, taas oo u badbaadin doonta waqti badan.
Iyada oo ay weheliso isbeddelada kuwa raacsan, Clubhouse waxay soo bandhigtay door cusub oo loo yaqaan "Hogaamiyaha". Hogaamiyuhu waxa uu bilaabi karaa qolalka oo jadwal u samayn karaa dhacdooyinka ay dhammaan xubnaha naadigu arki karaan,laakin ma tafatirin karo goobaha naadiyada,magacaabo magaca naadiyada,ama ku dari karo/ka saari karo xubnaha. Maamulayaashu waxay dooran karaan xubnaha naadiyada lagu kalsoon yahay si ay u magacaabaan Hogaamiyeyaal.
Sida Loo Sameeyo Koontada Clubhouse on Android
Sida loo arko jawaabaha qarsoon ee abka Twitter-ka?
Sida loo tirtiro Discord Account on Android
Hubinta X Dib u eegis: Hagaaji hubinta WooCommerce ku dar iibka iibka kadib